Shacabka muqdisho oo ku waabariistay magaalada oo xidhan wadooyinka oo la gooyay+ sababta oon la ogayn | JIGJIGA.NET
Shacabka muqdisho oo ku waabariistay magaalada oo xidhan wadooyinka oo la gooyay+ sababta oon la ogayn
Published on January 30, 2018 by admin · No Comments
Qaar ka mid ah wadooyinka Magaalada Muqdisho ee caasimada somaliya ayaa saaka xiran, kadib markii dadka ay ku soo tooseen ciidamada ammaanka oo xiray wadooyinka, gaadiidkana u diidaya isticmaalka wadooyinkaas.
Wadooyinka xiran saaka ee gaadiidka rayidka loo diidaayo, ayaa waxaa ka mid ah Isgoysyada Sheekh Cali Suufi oo Baabuurta loo diidaayo dhanka Maka Al-Mukarama inay u soo gudbaan, Isgoyska Bakaaraha, Isgoyska Hawlwadaag, Isgoyska Afarta Tarjiin illaa Isgoyska Sanca.
Ciidamada NISA ee goobahaasi Koontaroolada ku leh ayaa gaadiidka yar yar iyo mootooyinka Bajaajta u diidaya inay maraan wadada, waxayna u sheegayaan in wadada ay tahay mid xiran.
Lama oga sababta loo xiray wadooyinkaan iyo isbedelka amni ee ka jira Magaalada, balse Saraakiil ka tirsan NISA, ayaa sheegay in ciidamada amarkaasi la siiyay xirista wadooyinka.
Wadada Maka Al-Mukarama qaybo ka mid ah ayaa si caadi ah u shaqeynaysa, laakiin iyada qudheeda waxa ay ka xiratay agagaarka daarta Saybiyaano oo Koontarool ciidan uu yaallo.
Muqdisho dhaqamada sanadihii dambe ku soo kordhay ayaa ah wado hada iyadoo furan shacabka isticmaalayeen mar kaliya la arko iyada oo xiran oo gaadiidka loo diidaayo, iyadoo aysan ogeyn shacabka sababta wadada loo xira
waxaan ilaa hada cadayn sababta loo xidhay wadoyinkaas magaalada muqdisho